MATAKKAL WAMBARAATTI FINCILLI ITTI FUFEE JIRA! | QEERROO
Gaalessaa haauuf yaalanii jiru.
Qeerroon Gaalessaa ibsa waajjirichaatti muufachuun fincila kan finiinsan yeroo ta’u,komii hawaasi Oromoo bal’aan nu gadate nutis eenyummaa keenya akka #Oromoota_Raayyaatti ibsachuuf #Irreessa irratti argamnee eenyummaa fi aadaa Oromoo Matakkal Wambaraa calaqqisiifan jechuun qeerroofi qarreen,jaarsaafi jaartiin utuu hin hafin gara ayyaana Irreechaatti imalaa jiru.
Miidiyaaleen Guguddoon,jaallattoonni Ilmaan Oromoofi Oromummaa leellisan ilmaan Oromoo
Kan jedhamuufii latiinsaanis Oromoota Maccaa keessattis Macca kudha lamman keessaa
#LaalooMaccaa Goojjamii fi Wambaraa keessa jiraatu.Kana malees,Gaalessi warra Amuruurraa Wambarri Warra Sibuu naannoo Mandii fi Najjoorrraan babal’atan ta’uu seenaan isaanii ni ibsa.
Kanaafis imaan Oromoo kana bakka jiranitti mirga eenyummaa fi afaan aadaa isaanii kunuunfatani jiraachuu akka qabaataniif tumsa yaa taasifnu!